यस्ता छन लेमनग्रासका फाइदा - कृषि डेली
Home banner यस्ता छन लेमनग्रासका फाइदा
हामीसँग त्यस्ता थुप्रै वनस्पति छन्, जसको औषधिय महत्व छ । जस्तो कि, लेमनग्रास । यसलाई पेयको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसरी पिउँदा जिब्रो त रसाउँछ नै, स्वास्थ्यलाई पनि फाइदा गर्छ ।
यस्ता वनस्पतिको सेवनले हामीलाई प्राकृतिक रुपमै स्वास्थ्य-लाभ मिल्छ । सानोतिनो शारीरिक समस्याको निदान खोज्न मात्र होइन, शरीरको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन पनि लेमनग्रास नियमित पिउन सकिन्छ ।
के पाइन्छ लेमनग्रासमा ?
यसमा पाइने एन्टीसेप्टिक गुणले छालालाई स्वस्थ बनाइराख्न मद्दत गर्छ ।
लेमनग्रास एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व हो । यसको सेवनबाट विभिन्न स्वास्थ्य लाभहरु प्राप्त हुन्छ । यो भिटामिन ए, बी, सी र फोलेटको लागि राम्रो स्रोत हो । यसमा पाइने पोटेसियम, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, आइरन शरीरलाई स्वस्थ रही कार्यसम्पादन गर्नको लागि आवश्यक हुन्छ ।
यसमा पाइने एन्टीअक्सिडेन्ट -फिनोलिक यौगिक)ले शरीरमा हुने विभिन्न रोगहरुबाट बच्न औषधिको रुपमा काम गर्छ । लेमनग्रासको मुख्य तत्व लेमोनल वा सिट्रल हो । जसमा एन्टीफंगल र एन्टी माइक्रोबियल गुण पाइन्छ । लेमग्रास स्वास्थ्यको लागि धेरै नै उपयोगी हुन्छ ।
यस्ता छन् लेमनग्रासको सेवनबाट पाइने फाइदाः
१. कोलेस्टेरोल कम गर्छ
२. शरीरबाट विषाक्त पदार्थ निकाल्छ
३. पेटको समस्या हटाउँछ
४. छालाको हेरचाह
लेमनग्रासमा पाइने एन्टीसेप्टिक र एस्टि्रन्जन्ट गुणको कारण यो छालाको लागि धेरै फाइदाकारी हुन्छ । यसले चिल्लो छालाको लागि धेरै राम्रो क्लिन्जरको रुपमा काम गर्छ र छालाबाट दाग धब्बा हटाउन मद्दत गर्छ ।
५. शरीरको दुर्गन्ध हटाउँछ
६. प्रतिरोधी प्रणाली बलियो बनाउँछ
Previous article‘एक नेपाली एक फलफूल’ अभियानमा २९ लाख बिरुवा
Next articleप्रदेश नम्बर २ मा गहुँको बीउ अभाव, प्रदेश सरकारको भूमिका के ?